SomaliaReport: Shirka Nabadda: Bisad lagu Daayey Qooleyda
Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya ayaa aaminsan in shirkan ay UN-tu qabanqaabisay ee maalinka talaadada ah ka furmi doona magaalada Nairobi uu khilaaf dhex dhigi doono Dawladda ku meel gaadhka ah iyo Islaamiyiinta qunyar-socodka ah ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca.
Guddoomiye ku xigeenkii hore ee Baarlamanka Soomaaliya, mudane Maxamed Cumar Dalxa ayaa wargayska Somalia Report ku yidhi “ Shirkan lama aqbali karo, Mujtamaca Soomaaliyeed iyo Baarlamankuba waxay u arkaan rabshad cusub oo la abuurayo.
Wuxuuna intaa sii raaciyey “Wuxuu shirkani ka soo horjeedaa danta qaranka” Shirkan ayaa ka cadhaysiiyey Soomaali badan maadaama lagu qabtay waddan ajnabi ah waxayna aaminsan yihiin in lagu kala dirayo dawladdooda. Ra’iisal wasaare Farmaajo ayaa ayaa ugu baaqay dawladda ku meel gaadhka ahi inay qaaddacdo shirkan, waxaana intaa sii dheer markuu ku amray inay hay’adaha UN-ta ee ka hawlgala Nairobi ay muddo 90 cisho ah gudahood ku yimaaddaan Muqdisho. Waxaanad mooddaa in baaqaasi ay xubno badan oo dawladda ka mid ahi aysan ku camal falin.
Afhayeenka Baarlamanka Soomaaliya, Shariif Xassan ayaa qaaday tallaabo ay kaga soo horjeedaan xildhibaanada baarlamanku ka dib markii uu u safray ka qayb galka shirkaas, arintaas oo ay ku khilaafsan yihiin sharci-dajiyeyaasha ayaa keentay dhaleecayn badan. Maxamed Ca/raxmaan Nadiif oo arinkaa ka hadlaya ayaa yidhi “Afhayeenku wuxuu ku tuntay qaanuunkii dajisnaa”.
Mudane C/raxmaan oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi “Ka qayb galka kal-fadhiyada siyaasadeed waa arin u taala golaha wasiirada, iyagay jirtaa hadday ka qayb galayaan iyo haddii kale. Baarlamanku kama qayb gali karo kalfadhiyadaas, haddiise ay timaaddo waa inuu baarlamanku ka wada hadlo”.
Dalxa wuxuu intaa sii raaciyey in aqlabiyadda baarlamanku ay qaaddaceen shirkaa oo ay taageereen baaqii golaha wasiirada. “Hassan xaq uma laha inuu ka qayb galo shir aanaan ka warqabin” ayuu intaa ku daray.
Hoggaanka Ahlu Sunna Wal jamaaca ayaa qudhoodu u muuqday kuwo ku kala tagsan aragtidaa, iyada oo ay qaarkood soo jeediyeen in shirka laga qayb galo halka ay kuwo kale ka soo horjeesteen. Illaa iyo hadase lama hubo in ururka ASWJ ay wakiiladoodu aadeen shirkan ay albaabadu u xidhan yihiin. Dalxa oo arinkaa ka hadlayana wuxuu yidhi “ Kal qaybsanka noocaas ahi wuxuu wiiqi karaa awoodda ururkan ASWJ oo runtii dawladda ku meel gaadhka ah la ahaa isbahaysi adag una suurogaliyey in xoogagga Al-Shabaab laga soo saaro gobolka Mudug isla markaana ay magaalooyinka muhiimka ah eek u yaala xuduudda Kenya ay gacanta dawladda ku meel gaadhka ah soo galaan.”
Kooxdan suufiyada qunyar socodka ah ee ku hawlgala caqiidada aan waafaqsanayn dagaalada ayaa iyadu ku soo biirtay saaxada dagaalka ka dib markii ay xoogagga Al-Shabaab soo faadheen qubuuraha suufiyada. Waxaana lagu eedeeya inay gacan saar la leeyihiin dawladda Ethiopia oo haysatay dalka muddo laba sano ah kana baxday dabayaaqadii 2009ka, arintaas oo ahayd dhimbishii hurisay isku dhacyada taagan. Inkasta oo wali loo arko ASWJ inay taxaaluf la leedahay ciidamada Ethiopia ayaa haddana wali waxay sumcad badan ku dhex leedahay shacabka maadaama ay ka abuurantay gudaha dalka.
Dalxa ayaa u arka in shirkan Nairobi looga gol leeyahay wiiqidda dawladda ku meel gaadhka ah maaddaama ay qorshaynayeen qabanqaabada doorashooyinka ka hor intuusan dhamaan xilligooda.
“Markasta oo ay siddeed bilood u hadhsan tahay dawladda, beesha caalamku waxay ololaysaa shirar lagu doonayo in lagu rido dawladda markaa jirta loona keeno mid cusub”. Dalxa ayaa sidaa yidhi. Isaga oo hadalkiisa sii watan wuxuu yidhi “Arintani waxay jirtay illaa dawladdii Cabdi Qaasim, waxaasi waa kaftan oo kale”.
“UN-ta iyo wakiilka khaaska ahba waxay magu wadaan wa akhiyaano, aman doonayaan inay arkaan dawlad shaqaynaysa” ayuu ku daray.
Wakiilka khaaska ah ee Soomaaliya u qaabilsan xoghayaha arimaha dibadda, Augustine Mahiga ayaa ku adkaystay dhaqangalinta shirka Nairobi kaas oo ay ka soo qayb galayaan madaxweynaha is maamul goboleedka Puntland iyo saraakiil ka socota gobolo kale iyada oo ay jirto xiisadda ay arintani abuurtay.
Qorshe nabadeed ma socon karo wada hadal la’aan” ayuu yidhi Mahiga. Wuxuuna intaa ku daray in hindisahani salka ku hayo heshiiskii Jabuuti ee ahaa in dhamaan dhinacyada is haya miiska wada hadalka la isugu keeno si loo gaadho naabd waarta.”